नेपालीले काम गर्ने खाडीका ६ देश र मलेसियाको पछिल्लो जानकारी | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
नेपालीले काम गर्ने खाडीका ६ देश र मलेसियाको पछिल्लो जानकारी
(नाेट : खाडीका देश र मलेसियाको पछिल्लो कोरोना अपडेट दिनमा दुई पटक हुन्छ । तर सङ्क्रमित नेपालीको सङ्ख्या भने नेपाली दूतावास वा गैरआवसीय नेपाली संघ एनआरएनएले सार्वजनिक गरेका बेलामा मात्र अपडेट हुन्छ । यो अपडेटमा त्यहाँ रहेका नेपाली दूतावासले पुष्टि गरेका सङ्क्रमित नेपालीकाे सङ्ख्या​ र गैरआवसीय नेपाली संघ एनआरएनएको तथ्याँक समावेश गरिएको छ । )
काठमाण्डाै, असाेज ७ गते – विश्वका विभिन्न ४३ देशमा रहेका नेपाली कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको स्वास्थ्य समितिका अनुसार अहिलेसम्म यी देशमा रहेका ३४ हजार ९ सय ३९ जना नेपालीमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ ।
सङ्क्रमितमध्ये ९४ प्रतिशत भन्दा बढी ३२ हजार ९ सय ८९ जना नेपाली कोरोना मुक्त भएको समितिले जनाएको छ । यस्तै समितिका अनुसार विदेशका विभिन्न १६ देशमा २ सय ४३ जना नेपालीको कोरोनाको कारण ज्यान गएको छ ।
खाडीका ६ देश र मलेसियामा अहिलेसम्म ८ लाख ११ हजार ८१४ जनामा काेराेना सङ्क्रमण भएकाे छ । जसमध्ये ७ लाख ५४ हजार ५३२ जना निकाे भइसकेका छन् भने ५० हजार ३१५ जना उपचाररत छन् । यी देशमा काेराेनाका कारण ज्यान गुमाउनेकाे सङ्ख्या ६ हजार ९६७ पुगेकाे छ ।
अहिलेसम्म विश्वका दुई सय १३ देशका तीन कराेड १५ लाख ३७ हजार ३८५ जनामा सङ्क्रमण फैलिसकेको छ । ९ लाख ७० हजार ३५३ जनाको ज्यान गएको छ भने दुई कराेड ३१ लाख ५२ हजार ८६० जना निको भएका छन् ।
सङ्क्रमित सङ्ख्या : १ लाख २३ हजार ९१७ जना । ( २३ हजार ६८१ नेपालीसहित)
निको भएर घर फिरेकाहरु : १ लाख २० हजार ७६६ जना ।
अस्पतालमा उपचाररत : २ हजार ९४० जना ।
मृतकको संख्या : २११ जना ।
( नाेट : माथि समावेश गरिएकाे तथ्याँक गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिकाे हाे ।)
कतारबाट घर फर्कंदै हुनुहुन्छ ? पीसीआर परीक्षण गर्ने अस्पतालबारे जान्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेस्
- कतारको श्रम मन्त्रालयका अनुसार, बिदामा गएका तर कोरोनाका कारण कतार फर्कन नपाएका श्रमिकको यो अवस्थाको अन्त्य भएपछि स्वतः कतारको भिसा नवीकरण हुने र कतार फर्कन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
अब पासापेर्टको म्याद सकिएको एक वर्ष ननाघेका नेपालीहरुले कतारी आईडी र भिसा सजिलै नवीकरण गर्न सक्नेछन् ।
दूतावासमा सम्पर्क गर्नुहाेस् :
- कतारमा रहेकाे नेपाली दूतावासले समस्यामा परेर स्वदेश फर्कन पर्ने अवस्थामा रहेका नेपालीलाई दूतावासमा यसअघि फारम भरेकाे भए पनि फेरि भर्न अनुराेध गरेकाे छ । समस्या अनुसार सम्पर्क गर्ने व्यक्ति पनि ताेकेकेा छ ।
घर फर्कदा ध्यान दिनपर्ने कुराहरु
- कतारमा पहिलेको तुलनामा आर्थिक गतिविधि केही सञ्चालन हुन थालेका छन् । पछिल्लाे समय काेराेना सङ्क्रमित घट्दै गएका छन् । स्वास्थ्य समितिका अनुसार कतारमा नेपाली श्रमिकमा पनि काेराेना सङ्क्रमण घट्दै गएकाे छ
कतार खुकुलाे हुँदै
- कतारले कोरोना महामारीका बेला विदेशी नागरिकलाई प्रवेशमा लगाएको रोक हटाउँदै अगष्ट १ देखि प्रवेश अनुमति दिएकाे छ । तर नेपाली नागरिककाे प्रवेशका सन्दर्भमा भने स्पष्ट भनेकाे छैन् ।
कतार प्रवेशका लागि अनुमति लिनु पर्छ ।
- कतारले जारी गरेको नियम अनुसार दक्ष र अदक्ष श्रमिकसहित घरेलु कामदारलाई पनि अगष्ट १ देखि प्रवेशमा अनुमति दिएकाे छ । तर उनीहरुले प्रवेशका लागि अनुमति लिनु पर्छ ।
- कतारले प्राथमिकता, सार्वजनिक स्वास्थ्यको मापदण्ड, सरकारी र अर्ध सरकारी क्षेत्रको आवश्यकता र मानवीयताको आधारमा अनुमति दिने जनाएको छ । कतारले जानेले पनि यात्रा गर्नुभन्दा ४८ घण्टाअघिकाे कोरोना पोजेटिभ नभएको रिपोर्ट पेश गर्नुपर्छ । कतार पुगेपछि क्वरेण्टीनमा बस्नैपर्छ ।
- होटल क्वरेण्टीनमा बस्दा पोजेटिभ रिजल्ट आएकाहरु आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ भने नेगेटिभ आएमा होटल क्वरेण्टीपछि पनि एक हप्ता होम क्वरेण्टीनमा बस्नु पर्छ ।
सङ्क्रमित सङ्ख्या : ८५ हजार ५९५ जना । ( १ हजार ९५० नेपालीसहित)
निको भएर घर फिरेकाहरु : ७५ हजार ८६ जना ।
अस्पतालमा उपचाररत : १० हजार १०४ जना ।
मृतकको सँख्या : ४०५ जना ।
- यूएईले मार्च १ भन्दा अघि टुरिष्ट र रेसिडेन्ट भिसा सकिएर गैरकानुनी हैसियतमा बसिरहेका विदेशी नागरिकलाई यूएईले तीन महिनाको आममाफी दिएको छ ।
- यूएईले भिसा सकिएका तर कोरोनाको कारण घर फर्कन नपाएकालाई मे १८ देखि अगष्ट १८ सम्म देश छाड्न समय दिएको थियो । तर अब यूएईले यही समयलाई थप तीन महिना थप्दै नोभेम्बर १७ सम्म पुर्‍याएको छ । तर यो नियम मार्च १ भन्दा पछि भिसाको अवधि सकिएका, जागिर गुमाएका र भिसा क्यान्सिल भएकालाई भने लागू हुने छैन ।
- आममाफीमा सहभागी भएर दुबई इन्टरनेशनल एअरपोर्ट भएर आउनेले उडान हुनुभन्दा ४८ घण्टाअघि नै त्यहाँको अध्यागमनमा गएको प्रक्रिया मिलाउनुपर्छ ।
- यूएईले मार्च १ पछि भिजिट भिसाको म्याद सकिएकालाई यूएई सरकारले अगष्ट ११ देखि थप एक महिनाको भिसाको अवधि थपिदिएको छ । भिजिट भिसाको म्याद मार्च १ पछि सकिएको भए तपाईँ अबको एक महिनाभित्र यूएई छाड्दा जरिवाना लाग्ने छैन ।
- जुन १ देखि जुलाई ११ सम्ममा भिसाको अवधि सकिएकाले सेप्टेम्बर १० देखि एक महिनाभित्र नयाँ भिसा लिनु पर्नेछ । जुलाई ११ भन्दा पछि भिसाको म्याद सकिएकाले भने पहिलेकै नियम अनुसार नयाँ भिसाका लागि प्रक्रिया गर्नुपर्ने यूएई सरकारले जनाएको छ ।
- बिदामा यूएईभन्दा बाहिर रहेका तर कोरोनाको कारण फर्कनुपर्ने समयमा फर्कने नसकेकाको हकमा भने दुई देशबीच उडान सुरु भएको एक महिनाको अवधिलाई ग्रेस अवधि भनेर दिएको छ । यूएईभन्दा बाहिर रहेका भिसाको अवधि सकिएकाहरुले नियमित उडान सुरु भएको एक महिनाभित्र यूएई गएर नयाँ भिसा लिनुपर्ने नियम बनाइएको छ ।
- खान, बस्न लगायत काेराेनाका कारण समस्या परेकाे छ भने दूतावासमा अनलाइन फारम भरेर जानकारी गराउनुहाेस् । दूतावासका अनुसार अहिले स्वदेश फर्कने नेपालीकाे काेराेना जाँच विमानस्थलमा यूएई सरकारले नै निशुल्क गरिदएकाे छ ।
सामान्य अवस्थातिर फर्कदै यूएई
- जुलाई ७ देखि यूएई पर्यटकका लागि खुलेकाे छ । ठूला सपिङ मल र पर्यटकीय गन्तव्यहरु खुलेका छन् । यूएईमा आर्थिक गतिविधि पनि लगभग सञ्चालनमा आएका छन् । कतिपय कम्पनीले त नेपाली श्रमिकलाई लैजान पनि थालेका छन् ।
- यूएई सरकारले यूएई बाहिर रहेका वा बिदामा रहेका रेसिडेन्ट, इम्प्लोइमेन्ट भिसा भएकालाई यूएई फर्कन चाहिने अनुमति आवश्यक नपर्ने भएकाे छ ।
जुलाई ७ देखि यूएई पर्यटकका लागि खुलेकाे छ । ठूला सपिङ मल र पर्यटकीय गन्तव्यहरु खुलेका छन् । यूएईमा आर्थिक गतिविधि पनि लगभग सञ्चालनमा आएका छन् । कतिपय कम्पनीले त नेपाली श्रमिकलाई लैजान पनि थालेका छन् ।
- यूएई जानेले उड्नुअघि कोभिड–१९ को परीक्षण गरेको हुनु पर्नेछ भने यूएई सरकारले जारी गरेका स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न पर्नेछ ।
- कतिपय श्रमिकको रोजगारी गुमे पनि काम गुमाएका बाहेकका नेपाली श्रमिक पनि यूएईमा काममा फर्कन थालेका छन् ।
- पछिल्लो समय यूएईमा कोरोना सङ्क्रमण दर घट्दै गएको छ । त्यहाँ कार्यरत नेपालीमा पनि कोरोना सङ्क्रमण घटेको एनआरएनएको स्वास्थ्य समितिले जनाएको छ ।
सङ्क्रमित सङ्ख्या : ३ लाख ३० हजार ७९८ जना (२४०० जना नेपालीसहित) ।
निको भएर घर फिरेकाहरु : ३ लाख १२ हजार ६८४ जना ।
अस्पतालमा उपचाररत : १३ हजार ५७२ जना ।
मृतकको सँख्या : ४ हजार ५४२ जना ।
भिसा सम्बन्धि नयाँ व्यवस्था
साउदीले थप एक महिना निःशुल्क भिसाको अवधि बढाइदियो, घर बिदामा गएकाको पनि म्याद थप हुने
- स्वदेश फर्कनका लागि अनिवार्य रुपमा काेराेना परीक्षण गर्ने पर्ने हुन्छ । त्यसैले दूतावासले सकेसम्म आफ्नो कम्पनीमार्फत् गर्ने व्यवस्था गर्नुहुन अनुरोध गरेकाे छ ।
- सम्भव नहुनेहरुले आफूलाई थाहा भएको वा पायक पर्ने स्थानमा परीक्षण गराउन सकिन्छ। त्याे पनि सम्भव नभएमा अनिरूद्र पाठकलाई ०५४६३५६०२३ मा, कृष्ण भूषाललाई ०५९८२५६७१८ मा परीक्षणका लागि सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।
- अत्यावश्यक सहयोग, सल्लाह र स्वदेश फिर्तीका लागि साउदीमा रहेको नेपाली दूतावासको ०११४६१११०८ नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस् । बिदाको दिन अथवा कार्यालय समयभन्दा अघि र पछि बेलुका ८ सम्म दूतावासको हटलाइनमा ०५५९३८९६०० नम्बरमा (whatsapp) समेत यसै फोनमा उपलव्ध छ) सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।
सङ्क्रमित सङ्ख्या : ६५ हजार ७५२ जना । ( ४५१ जनाभन्दा धेरै नेपालीसहित)
निको भएर घर फिरेकाहरु : ५८ हजार ६२६ जना ।
अस्पतालमा उपचाररत : ६ हजार ९०० जना ।
मृतकको सङ्ख्या : २२६ जना ।
- बहराइन सरकारले भ्यालिड भिसा भएकाहरुलाई प्रवेशमा कुनै अनुमति लिन नपर्ने बताएकाे छ। तर यो नियम भ्यालिड भिसा भएका र त्यो भिसा बहराइनको राष्ट्रिय पासपोर्ट र बसोबास सम्बन्धित मन्त्रालयले जारी गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ ।
- सबै प्रकारका भिसाहरु जुलाई २१ देखि अक्टोबर २१ सम्म स्वतः नवीकरण हुनेछन् ।
पुन: रोजगारीका लागि बहराइन जान चाहनेको सूची सार्वजनिक, अब जाँदा यी नियम अनिवार्य
- भिजिटरले अक्टोबर २१ भन्दा पछिसम्मका लागि पनि भिसाको अवधि थप्न चाहेमा भने नवीकरणका लागि निवेदन दिन पर्नेछ । यस्तो निवेदन अनलाइन पोर्टलबाट दिन सकिने बहराइनको स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।
- बहराइनबाट फर्कन टिकट किनेका र दूतावासकाे सूचीमा परेर फर्कने तयारीमा रहेकाले काेराेना जाँचकाे कपी नाम र नम्बर देखिने गरी राजदूतावासमा उपलब्ध गराउन अनुराेध गरेकाे छ ।
- काेराेना जाँच गराउने ठाउँबारे जान्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेस् । बहराइनले निशुल्क काेराेना जाँच गरिदिन्छ ।
काेराेना सङ्क्रमित सङ्ख्या : एक लाख ६८३ जना । (एनआरएनएका अनुसार, १६ सय ३५ जना नेपालीसहित)
काेराेना निको भएर घर फिरेकाहरु : ९१ हजार ६१२ जना । (स्वास्थ्य समितिकाे अनुसार लगभग १२ सय नेपाली निको भएका छन् । )
अस्पतालमा उपचाररत : ८ हजार ४८३ जना ।
काेराेनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या : ५८८ जना ।
कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिका कारण विदेशी नागरिकको भिसा थप तीन महिना बढाउँदै नोभेम्बर ३० सम्म पुर्याएको कुवेतमा रहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।
उ​डान खुले पनि नेपालसहित ३० देशका नागरिकले भने कुवेत प्रवेश गर्न पाउने छैनन् ।
- कुवेतले नेपाली नागरिककाे प्रवेशमा रोक लगाएको छ। कुवेतले अगष्ट १ देखि व्यवसायिक उडानहरु खाेलेकाे छ । तर उडान खुले पनि नेपालसहित ३० देशका नागरिकले भने कुवेत प्रवेश गर्न पाउने छैनन् ।
- काेराेना जाँचका लागि दूतावासमा फाेन गरेर जानकारी लिनुहाेस् । त्यहाँ सरकारले नै पठाइदिने हाे भने सरकारले नै काेराेना जाँच गरिदिन्छन् । तर अन्य समस्यामा परेर स्वदेश फर्कनेले भने आफ्नो कम्पनीमार्फत गर्न र सम्भव नहुनेले आफूलाई जानकारी भएको वा पायक पर्ने स्थानमा परीक्षण गर्न सकिने दूतावासले जनाएकाे छ ।
सङ्क्रमित सङ्ख्या : ९४ हजार ७११ जना । (५० जना नेपालीसहित)
निको भएर घर फिरेकाहरु : ८६ हजार १९५ जना ।(स्वास्थ्य समितिकाे अनुसार लगभग ८० प्रतिशत नेपाली निको भएका छन् । )
अस्पतालमा उपचाररत : ७ हजार ६५१ जना ।
मृत्यु हुनेको सङ्ख्या : ८६५ जना ।
बिदामा रहेकाका लागि ओमान खुल्याे
- ओमानबाट बिदामा नेपाल आएर, भिसा तथा रेसिडेन्स कार्ड भएकाहरु अब जान पाउने भएका छन् ।
- फर्कनका लागि कम्पनी वा एअरलाइन्समार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अनुमति लिनु पर्छ । कोरोनाको कारण ६ महिनाभन्दा बढी नेपाल बसेकाहरु पनि ओमानको सम्बन्धित निकायको अनुमतिमा फर्कन सक्ने त्यहाँ रहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।
अब निःशुल्क घर फर्कन फारम भरेर ओमानमा रहेको नेपाली दूतावासमा बुझाउनुहोस् ।​
- कोरोनाको कारण बेरोजगार भएका तथा कम्पनीले कुनै पनि सहयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा भएका र आफैं टिकट किनेर घर फर्कन नसक्ने नेपालीले दूतावासले तोकेको ढाँचा अनुसार फारम भरेर बुझाउन अनुरोध गरिएको छ । यसबारेमा थप बुझ्न परेका दूतावासमा कार्यालय समयमा श्रम सहचारी कृष्णा कुमारी गौलीलाई ७१५९२५०६ मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।
- ओमानमा समस्यामा पर्नुभएको छ तर टिकट काट्ने पैसा नभएर घर फर्कन पाउनुभएको छैन ? यदि यस्तो समस्यामा हुनुहुन्छ भने अब निःशुल्क घर फर्कन फारम भरेर ओमानमा रहेको नेपाली दूतावासमा बुझाउनुहोस् ।
- खान बस्न लगायत काेराेनाका कारण समस्या परेकाे छ र स्वदेश फर्कन चाहनुहुन्छ भने दूतावासमा अनलाइन फारम भरेर जानकारी गराउनुहाेस् ।
सङ्क्रमित सङ्ख्या : १० हजार ३५८ जना(दूतावासका अनुसार, ८१ जना नेपालीसहित)
निको भएर घर फिरेकाहरु : ९ हजार ५६३ जना । (दूतावासका अनुसार, ८१ जना नेपालीसहित)
अस्पतालमा उपचाररत : ६६५ जना ।
मृतकको सङ्ख्या : १३० जना ।
(मलेसियामा नेपालीमा थप सङ्क्रमण देखिएकाे छैन । सङ्क्रमित ८१ जना निकाे भइसकेका छन् ।)
नि:शुल्क टिकटका लागि दूतावासमा सम्पर्क गर्नुहाेस्
- तपाईँ मलेसियामा हुनुहुन्छ र रोजगारी गुमेको छ तथा घर फर्कन टिकट काट्न सक्नुभएको छैन भने दूतावासमा आवेदन दिनुहाेस् ।
- दूतावासमा तोकेको निवेदन ढाँचा अनुसार आफ्नो विवरण भरेर दूतावासमा उपस्थित भएर वा इमेल [email protected] मार्फत पठाउन सकिनेछ । साथै दूतावासको हटलाइन नम्बर ६०१६२४२७७७ मा ह्वाट्स्एप गरेर पनि निवेदन पेश गर्न सकिन्छ ।
- हवाई टिकटको सुविधा मात्र लिने मनसायले कुनै व्यक्तिले तथ्य फरक गरी वा झुटा विवरण पेश गरेर सुविधा लिएको पाइएमा प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्ने दूतावासले जनाएको छ ।
यसबारे थप जानकारीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहाेस्​​
- मलेसियाले अहिले बिदामा रहेका श्रमिकलाई प्रवेश अनुमति दिएको छैन ।​
समस्या दूतावासमा राख्नुहाेस् :
- कोरोनाको कारण कम्पनीमा या बासस्थानमा कुनै समस्या भएमा पनि दूतावासमा सम्पर्क गर्न अनुराेध गरेकाे छ ।
अब स्वदेश फर्कन यी कुरा अनिवार्य
- नियमित उडानबाट नेपाल आउने हरेक यात्रुको पीसीआर नेगेटिभ आएको रिपोर्ट अनिवार्य बुझाउनुपर्छ, त्यो पनि ७२ घण्टा भित्रको । पीसीआर नेगेटिभ सुनिश्चित भएपछि मात्र सम्बन्धित वायुसेवाले यात्रुलाई बोर्डिंग पास दिनुपर्ने भएको छ ।
खाडीका देश र मलेसियासँगै नेपाल सरकारले गरेका निर्णयबारे जान्न याे खबर पढ्नुहाेस्
- एउटै उडानबाट आएका सबै यात्रुको साथमा पीसीआर परीक्षणको नेगेटिभ नतिजा रिपोर्ट भएमा सबै यात्रु होम क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी जान सक्नेछन् ।
- अब नियमित उडानबाट आउने सबै यात्रुले जहाज चढ्नुभन्दा ७२ घण्टा भित्रको पीसीआर नेगेटिभ भएको प्रमाण र कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)को वेवसाइटमा राखिएको फर्म भरेर त्यसको बारकोड वा प्रिन्ट अनिवार्य साथमा ल्याउनुपर्नेछ ।
- पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ भएको रिपोर्ट साथमा नभएमा सात दिन होटल क्वरेण्टीनमा बस्नपर्छ । होटल बुक विदेशबाट नै गर्न पर्छ ।
हाेटल क्वरेण्टीनबारे जान्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेस्
कस्ता श्रमिकले पाउँछन् नि:शुल्क टिकट
- नेपालबाट श्रम स्वीकृति वा पुनः श्रम स्वीकृति लिएर आएको तीन वर्ष ननाघेको व्यक्तिले रोजगारी गुमाएको र घर फर्कन रोजगारदाताले टिकट नदिएको भएमा टिकटका लागि आवेदन दिन सकिन्छ ।
- सम्बन्धित गन्तव्य देशको सरकार, रोजगारदाता, रोजगारीमा पठाउने इजाजतपत्रवाला संस्था वा अन्य स्रोतबाट हवाई टिकट खर्च नपाएको वा आफ्नै खर्चमा घर फर्कन नसक्ने अवस्थाका व्यक्तिलाई हवाई टिकट उपलब्ध हुनेछ ।
- आममाफी पाएका, डिटिन्सन सेन्टरमा रहेका र घर जान अनुमति पाएका, जुनसुकै कारणले भए पनि बहिर्गमन भिसा पाएका र रोजगारी गुमाएका व्यक्तिलाई निःशुल्क उद्धारको प्राथमिकतामा राखेको छ ।
भदौ १६ गतेदेखि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भएको छ । कोभिड १९ पीसीआर परीक्षण सहज भएका देश यूएई, मलेसिया लगायतबाट सुरुमा नियमित उडान हुनेछ भने साउदी, कतार, कुवेत, बहराइनजस्ता देशमा अहिले नियमित नहुने र चार्टर्ड उडान मात्रै हुने निर्णय भएको छ । पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ भएमा विमानस्थलबाट घर जान पाइन्छ भने पीसीआर नगरी आएमा सात दिन काठमाण्डौमा होटल क्वरेण्टीनमा आफ्नै खर्चमा बस्नुपर्छ ।